Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin’ny Hetita; raha maka vady amin’ny zanakavavin’ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin’ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko? Izany no nolazain-dralehilahy tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan’ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy. Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin’ny tany. Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika.
Izany no nanaovana ny anaran’ny tanàna hoe Zoara. Haringanao miaraka amin’ny meloka va ny marina? Faingana, makà koba tsara toto intelon’ny famarana; dia bxiboly ka ataovy mofo. Ary dia mbola nitomany azy ny rainy. Veloma ianao, mba anomezo ahy kely ny dodaiman’ny zanakao.
Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko baoboly sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.
Tsy hanome ahy na inona na inona ianao; raha hataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman’osinao: Misia fahazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo. Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Inty aho; iza moa ianao, anaka?
Mianiana ary amiko aloha. Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3 fa ny voan’ny hazo eo afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: Mpisafo ianareo; hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo.
Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao.
Dia nirahiny hiala avy teo amin’ny lohasahan’i Hebrona izy, dia nankany Sekema. Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny.
Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Angamba folo no ho hita ao. Ny mara baibply ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Aoka hahita fitia eto imason’itompokolahy aho.
Inona moa no hevitr’ireny antokony rehetra nifanena tamiko ireny? Ny sadika rehetra ho karamanao, dia niteraka sadika ny ondry aman’osy rehetra.
Nahoana no mifampijery foana ianareo? Si vous n’avez pas trouvé votre PDF, vous pouvez affiner votre demande. Mba atopazy ny masonao ka jereo, fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin’ny ondrivavy sy ny osivavy, satria efa hitako izay rehetra nataon’i Labana taminao.
Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny havako sy amin’ny tranon’ikaky.
Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Rehefa fito ambin’ny folo taona Josefa, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izydia tamin’ny zanak’i Bila sy ny zanak’i Zilpa, vadin’i Jakoba rainy; ary Josefa nitati-bolana tamin-drainy.
Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Baiboyl.
Ary hoy izy taminy: Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Fa Ilay natahoran’i Isaka rainy kosa no nianianan’i Jakoba. Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany.
Tsia, fa Saraha vadinao hiteraka zazalahy aminao; ary ny anarany dia hataonao hoe Isaka; ary ny fanekeko haoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an’ny taranany mandimby azy. Avy any amin’ny tany Kanana izahay mba hividy hanina. Aoka hiangona ny rano eny ambanin’ny lanitra ho eo amin’ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany. Timna loham-pireneny sy Alva loham-pireneny sy Jeteta loham-pireneny 41 sy Oholibama loham-pireneny sy Elaha loham-pireneny sy Pinona loham-pireneny 42 sy Kenaza loham-pireneny sy Temana loham-pireneny sy Mibzara loham-pireneny 43 sy Magdiela loham-pireneny ary Irama loham-pireneny.
Aleoko homena anao izy, toy izay homena lehilahy hafa; tomoera eto amiko. Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy.